UJulia Menshova: ubomi bomntu, i-biography, indoda, intsapho, abantwana. Iindaba zakutsha malunga nobomi bukaYulia Menshova
Ngaba uJulia Menshova unemiqulu eminingi eyamqinisekisa ukuba "bonke abantu bangabo ...", okanye ingabe yenzeke ukuba imnike uthando olulodwa lobomi kunye nolonwabo lwentombi? Yintoni efana nokuba yintombi yabazali beenkwenkwezi ezinjalo: inceda ebomini okanye, ngokuchaseneyo, iyayichaphazela. Ngoko, uJulia Menshova kunye nobomi bomntu benkwenkwezi - amaqiniso, iingcamango, izibilini ... Masiqale intetho phakathi kwethu, amantombazana, ngokufanelekileyo kunye nobomi - ukusuka kwimiba yendalo, kwaye ke iya kuba njani ... Ukuba uyayikhupha imfihlo kwikhefu, makube njalo : umnyango kwakufuneka uvaliwe ngokukhuselekileyo.
UJulia Menshova: i-Biography
Kwintsapho yomqondisi uVladimir Menshov kunye nomdlali we-actress uVera Alentova kulindeleke ukuba kuzalwe inkwenkwe Yura, kwaye intombazana yazalwa ngoJulia. Ngomhla wokutshisa ngoJulayi ngo-1969, emva kwamagama athi "unentombazana", ubaba othukile wagxininisa waza wabuya wamkhohlwa ukuthatha umfazi nentombi yakhe esibhedlele. Ukufihla ukudumala kwakhe, uVladimir Menshov wasebenza ngekhefu, kwaye xa uYulia eneminyaka emithathu ubudala, washiya intsapho. Ukuba oku kwenzekayo kumhla wethu, ngaba ubaba okhungathekileyo wale nkwenkwe uyaba lusizi? Ngokukhawuleza, kungekudala kwiminyaka engama-2-3 ndiza kuthumela umfazi kwiphulo elitsha kwizinto ezikhangayo kwikhaya lokubeleka, kodwa sele sele ifana nale nkwenkwana. Kodwa u-Menchov wakhetha ukushiya intsapho iminyaka emine, kwaye emva kokubuya kwakhe, u-Alentova akazange acinge ngezilingo. Ngokukhawuleza kwakhona, intombazana!
Ewe, kwakungenakwenzeka ukuqala incoko kunye nodumo kunye nobuntu, njengoko kuhloswe. Masiqhubeke. Njengabo bonke abantwana beenkwenkwezi, bejikelezwe ngomoya wokudala, uJulia waya esikolweni somculo, esenziwa kwiidrama ze drama kwaye wadlala kwisigaba. Kodwa umdlali we-actress njengomama, okanye njengomlawuli njengotata, intombazana ayizange ibone. Wayeliphupha lokuba ngumlobi okanye intatheli. Intswana ezimfutshane kunye namabali afundwa ngabantwana afunda nabo kunye nootitshala, kwaye ekupheleni kwebanga le-10 le ntombazana yanquma ngokukhetha kwakhe. Kodwa yonke into yavela ngokuhlukileyo ...
Ukuqala kwendlela yokudala uJulia Menshova
Akakwazanga ukuhambisa amaxwebhu kwi-Literary Institute - kwakungekho imisebenzi emithathu epapashwe. Kwaye uJulia wagqiba ekubeni angalahlekelwa ngumnyaka aze azame ukungena eMoscow Art Theater. UMen'shov usiqinisekisa ukuba oku kwakuyisigqibo sokuzikhethela, abazali abangazange bazi ngako. Hmm ... Wenza kwi-studio esaziwayo yesikolo-studio phantsi kwegama elithi Bolshova. Ngoko ke, siyakukholelwa, kodwa kube yimpumelelo engakumbi ukubeka emasikini ebuso ukuze uAlexander Kalyagin kunye noAlla Pokrovskaya bangayiboni intombi yomlawuli kunye nomdlali weqonga le-cinema yaseSoviet njengentombazana enesibindi - "UMoscow akakholelwa kwiinyembezi".
Kamva, uJulia wathi ukuba afunde, aze adlale kwidlaterha kwaye enze kwiifilimu, kwakunzima kuye. Emva kwakhe, babehlala bekhankanya kwaye babecinga ngamasela. Mhlawumbi yeso sizathu uMenshova wenza into encinane. Ukudlala iindidi ezilishumi, washiya i-theater kunye ne-cinema. Icandelo elilandelayo le-biographie kunye nobugcisa bukaJulia Menshova ngumabonakude. I-Oprah yaseRussia i-Oprah Winfrey ibonakala ifunyenwe kulo msebenzi ...
Iindaba ezothusayo malunga nobomi bomntu u-Valery Leontiev zifunde apha
Ubomi bomntu siqu kaJulia Menshova
Ngaphambi kokuba ahlangane nomyeni wakhe, u-Igor Gordin, uYulia akanayo into yokukhumbula: wayesebenomdla wokudibana, nangona wayehlala ethanda. Yonke ixesha awazinikela ekufundeni, ekusebenzeni, kunye nolwalamano phakathi koomama noyise, owamfungela. Umdlali we-actress wayehlala ehlangene nabazali abavuthayo. Luhlobo luni lobomi bomntu siqu.
UJulia Menshova no-Igor Gordin: unonwabo oluhle
Emva kokuba uJulia ethatywe ngokumenza abazali bajabule kwaye wahamba ekhaya. Kwaye emva kweenyanga ezintandathu watshata nomdlali kunye nomqondisi uGgor Gordin. Ngethuba leMenshova lalingama-28 ubudala. Emtshatweni, uJulia wazala abantwana ababini - u-Andrew noTaisia.
UJulia Menshova no-Igor Gordin
UJulia Menshova kunye nosapho lwakhe: umyeni wakhe nabantwana bakhe
I-Menshova kwiintlobo ezininzi iphindaphinda i-Vera Alentova: Umyeni kaYulia washiya intsapho waza wabuya emva kweminyaka emine emva koko. Yonke into, njengephantsi kwephepha lekhabhoni. Bade baxabana noGigor, njengabazali babo, bazitshintsha nje iindima zabo. Ukuba kwi-Menshovs iintsapho ezihlaziyekileyo zikhutshwe ngumyeni osheshayo, ngoko uGordins unomfazi.
Ngethuba lokuhlukana kweminyaka emine kwakukho amahlebezi amaninzi malunga neengxelo zikaJulia Menshova. Kwathethwa ukuba xa umdlali we-actress efumene ngokungcatsha kuka-Igor, waqala yonke into enzima. KuMenshova's instagram kuphela izithombe zabantwana kunye nomyeni wakhe, kodwa ipaparazzi izihlandlo eziliqela zakwazi ukufotoza uJulia kunye noSergei Kunkin, u-Ian Galperin, no-Andrei Chernyshov.
UJulia akafihla ubomi bakhe no-Igor Gordin. Ngokuphambene noko, ngakwesokunene nangakwesobunxele banika udliwano-ndlebe, iinkcukacha zokwabelana, ukuzonwabisa kubonisa iifoto zentsapho kwi-instagrama nakwezinye iiwebhsayithi zoluntu. Nangona umbonisi weTV ucinga ukuba uyonwaba, kodwa akayi kuyika i-jinx.
U-Alexander Nikitin noYuliya Menchova: Yena kunye naye
Kwisiqulatho se-TV esiqhakamshelweyo kunye nesingenangqondo "Phakathi Kwethu, Amantombazana" uAlexander Nikitin noYulia Men'shova badlala indima yabo ngokumangalisayo. Ngebali labo elichaphazelayo, banqoba iintliziyo zababukeli. Kwakuyi-duo ehlabayo ngokwenene. Intelligent Men'shov kunye neKititin enentliziyo ephazamisayo, owayeqhuba ingqondo yakhe kuphela ngombono owodwa, wadlala njengokungathi i-spark yayiqhuba phakathi kwabo kwaye bayathandana ngokwenene. Kwakungakholelwa ukuba le yimifilimu: ngoko umdlalo wabalingisi wawunokwemvelo, njengobomi. "Hayi, indlela uJulia Menshova eya ngayo uAlexandro Nikitin" - abalandeli beentetho baxhala emva kokubukela umboniso.
Zonke iimfihlelo zobomi bukaMarta Alexandrova bufundwa apha
Indlela yokwazi indlela yokwazi ... Ubomi bude kwaye abukwazi ukuqikelela kwaye okukuphela kwinto ayiyenzeki. Yonke into inokutshintsha ngethuba elithile ebomini bomntu kaYulia Menshova. Kwaye siya kulandela iindaba zakutshanje. Emva koko, ubomi bunomdla ngakumbi kunamacandelo ...
Ukubhula kweJeweler: ukuqoqwa Kwothando, Andiyithandi nguStephen Webster
Umshicileli omhle ngaphandle kokuphuma embhedeni? Iresiphi evela ku-Ani Lorak
I-cocktail kunye ne-cranberries kunye ne-rosemary
Ioli ye-Orange ngokumelene ne-cellulite